Xog: Qorshaha dhabta ah ee laga leeyahay isbaheysiga siyaasadeed ee Baydhaba - Caasimada Online
Home Warar Xog: Qorshaha dhabta ah ee laga leeyahay isbaheysiga siyaasadeed ee Baydhaba
Baydhaba (Caasimada Online) – Maalmihii lasoo dhaafay waxaa jirta hadal heyn ku saabsan isbaheysi siyaasadeed oo dhex mari kara Beelaha Koonfur Galbeed hormuudka u ah iyo kuwa reer Waqooyiga ah.
Ujeedka isbaheysiga dadka wada qaarkood waxay ku sheegeen inuu yahay inay wax ka badalaan saami qeybsiga siyaasadeed ee Soomaaliya, xilli labada xil ee Ra’iisul Wasaaraha iyo madaxweynaha ay Hawiye iyo Daarood kala qaataan.
Ma aheyn aragti ay dhinacyadaas u dhammaayeen, laakiin fikirkaas waxaa la xaqiijiyey inuu ka yimid odayaal siyaasadeed oo reer waqooyi ah, iyadoo kuwa reer Koonfur Galbeedna ay aqbaleen.
Inkastoo dadka qaar ay u dhigayeen ujeedka shirka in beesha hoggaamisa Koonfur Galbeed ay rabto in laga wareejiyo xilka guddoomiyaha Golaha Shacabka, haddana qaar ka tirsan xubnihii abaabulay shirka ayaa iska fogeeyey in dan ay hal beel leedahay looga hadli lahaa shirkaas.
“Ma jirto sabab ay reer waqooyiga ugu ololeeyaan dan cid kale, anaga dan ayaan leenahay, waana inay jirtaa wax ay qolo kasta ay hiigsaneyso oo laga shaqeeyo,” ayuu yiri mid kamid ah xubnihii abaabulay shirkaas.
Inta aan la gaarin mudadii shirka waxaa soo baxday in hoggaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen) inuu shirkii ka leexiyey dariiqii lagu balamay ee ahaa in labadaasi beelood iska wareystaan sida ay saami qeybsi cusub u abuuri karaan.
Laftagareen ayaa la xaqiijiyey inuu shirka u badalay olole loo sameynayo dib u doorashada madaxweyne Farmaajo. Waxaa shirkaas lagu casuumay madaxweyne Farmaajo, Fahad Yaasiin iyo Cabdullaahi Aadan Kulane.
Inta la ogyahay xubnaha reer Waqooyiga siyaasad ahaan aad ayey u qeybsan yihiin waqtigaan, dhinacyo kala duwan ayaa gacan ku lahaa xubnaha reer waqooyiga ee kusoo biiray Baarlamaanka 11-aad, waxaana markii la ogaaday inuu Farmaajo tagayo shirkaas bilaabatay dood cusub oo ah in loo socdo danta hal musharax.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka xukuumadda xil-gaarsiinta ah Mahad Khadar Guuleed oo isaga weli Farmaajo la shaqeysta iyo xubno ku dhow dhow ayaa isku dayaya in taageerayaashooda ay ku qanciyaan inay shirka tagaan.
Farmaajo waxaa la sheegay inuu rabo in shirkaas uu kaga dhawaaqo musharaxnimadiisa, inuu maalmo soo joogo Baydhaba iyo inuu xildhibaanada mid mid u arko, uuna ballan lasoo galo.
Wasiirkii hore ee warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo kamid ah siyaasiyiinta ugu culus dhanka reer Waqooyiga ayaa xaqiijiyey in wada-hadalkii iyo ujeedkii shirka la badalay oo madaxdii shaqada wax ka waday ay go’ansadeen in kuraasta sidoodii hore loo dhaafo.
Sidoo kale waxa uu sheegay Maareeye in kulankii Baydhaba uu isku badalay ololo loo sameenayo musharax gaar ah.
“Qofka qorshihii badalay waa Laftagareen, qofka ay rabaan in Baydhaba loo tagana waa Farmaajo,” ayuu yiri mid kamid ah xildhibaanada reer Waqooyiga oo aan la hadalnay, kaas oo sheegay in uusan hadda aqoon waxa uu Baydhaba ka doono, maadaama uusan Farmaajo ku siyaasad aheyn.
Dhowr jeer oo hore oo la isku dayey in la badalo saami qeybsiga kuraasta sare ee dalka laguma guuleysan, sababtuna waxaa loo arkaa in labada beelood ee inta badan qeybsata xilalka madaxweynaha iyo Ra’isul wasaaraha ay mid walba ku adag tahay inay ka shaqeyso majaxaabin beeleysan oo beesha kale ka dhan ah.
Farmaajo iyo Fahad waxaa la sheegayaa in aysan hadda xusul duub ugu jirin isbadalka saamiga, iyagoo fahasam culeyska ay leedahay arrintaan iyo in loo arki doono inay dagaal beeleed aadeen.
Balse waxay qabaan aragti ah in haddii Laftagareen uu ku guuleysto inuu xildhibaanadiisa iyo kuwa reer Waqooyiga isugu keeno magaalada Baydhaba inay faa’ido weyn u tahay ololaha Farmaajo, taasi oo xalay looga hadlay shir ka dhacay Villa Somalia.
Maadaama uu hadda isbadalay ujeedkii shirka lana fahmay in loogu ololeenayo Farmaajo, waxaa la eegayaa inuu shirka toos u fashilmi doono iyo inay tagi doonaan inta Farmaajo taageersan.